Miala amin’ny fandraisana tendrony
“Tandremo ny tenananreo sy ny ondry rehetra izay nanaovan’ny Fanahy Masina anareo ho mpitandrina, hiandrasanareo ny fiangonan’Andriamanitra, izay novidiny tamin’ny rany. Fantatro fa rehefa lasa aho dia hisy ambodia masiaka hiditra eo aminanareo izay tsy hiantra ny ondry. Ary avy aminareo no hiposahan’ny olona sasany mitory teny tsy marina hitaona ny mpianatra hanaraka azy” Asa. 20: 28-30
Eto anivontsika mihitsy no hisehoan’ny fiziriziriana amin-kevitra hafa. Ho avy ny famitahana ka raha azo atao , da dia ny olom-boafidy aza dia ho azony. Tsy ho nilaina akory ireo teny nolazain’Ilay Mpampianatra lehibe raha niharihary teo amin’ireo fihetsiketsehana ireo ny fiovaovana na koa ny filazana feno fitaka. Noho ireo loza maro isan-karazany hiseho no antony nanomezana io fampitandremana io.
Ny antony ananganako io famantarana loza io dia satria tazako amin’ny alalan’ny Fanahin’Andriamanitra izay zavtra tsy hitan’ny anadahiko sy ny rahavaviko. Mety tsy ho zavatra ilaiko loatra ny hanondro ireo dingan’ny fitaka rehetra izay tokony hotandremana ireo. Ampy ho ahy ny milaza aminareo hoe: miambena, ka tahaka ny mpiambina mahatoky dia arovy ny ondrin’Andriamanitra ndrao manaiky tsy amim-pandinihina tsara izay rehetra hambara amin’izy ireo fa hafatra avy amin’Andriamanitra. Raha ny hamorona fientanentanam-po no hiasantsika, dia hananantsika izay rehetra tiantsika ary mihoatra noho izay azontsika tantanana aza. “Torio ny teny” amim-pahatoniana sy amin’ny fomba mazava. Tsy tokony hoheverintsika ho asantsika ny mamorona fientanam-po.
Ny Fanahy Masin’Andriamanitra irery ihany no afaka mamorona hafanam-po tena izy. Avelao hiasa Andriamanitra, ary aoka ny olombelona mpanompony handeha moramora eo anatrehany, hiambina, hiandry, hivavaka ary hibanjina an’i Jesosy amin’ny fotoana rehetra, hotarihina sy hofehezin’ilay Fanahy Sarobidy, izay fahazavana sady fiainana.